Kuthetha ukuthini ukuphupha izinambuzane? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
1 Ukuphupha izinambuzane
2 Inokubonisa ntoni into yokuphupha izinambuzane?
3 Jonga inambuzane
4 Bulala inambuzane
5 Ngezinambuzane kuwo wonke umzimba
6 Izinambuzane endlwini
7 Phupha usisinambuzane
8 Ukuhlaselwa zizinambuzane
9 Ngezinambuzane ezinkulu
10 Ngaba olu hlobo lwamaphupha luyimbonakaliso embi?
Intsingiselo yolu hlobo lwamaphupha luphawu olucacileyo lokuba ezinye izinto ziyakukhathaza kwaye kufuneka uzilungise. Ukuphupha ngezinambuzane yinto yokuba abanye abantu abakungqongileyo bakukhathaza. Phambi kokuba uphume uye kugweba kubaluleke kakhulu ukuba uqale ufumanise ukuba ingaba yiyo yonke loo nto.
Kuqhelekile ukucinga ukuba yinto embi, kodwa eneneni sisicelo nje sokuyijonga. Ukuba unokuva ukungazi kwakho kuya kuba yinto enomdla kakhulu kwimeko yakho. Kukwabalulekile ukuhoya zonke iinkcukacha ezenzekileyo ephupheni lakho, kuba yile nto iya kubonisa intsingiselo.
Inokubonisa ntoni into yokuphupha izinambuzane?
Oku kungabonisa ukuba ishishini lakho lingena kwinqanaba elithembisayo kwaye inzuzo iya kulandela. Uhlobo lwenambuzane lunokubonisa ukuba yeyiphi into ekubonisa ukuba liphupha. Kungenxa yoko le nto kufuneka unikele ingqalelo kwezi nkcukacha ukuze uzitolike ngendlela efanelekileyo.
Ukuphupha ngezinambuzane luphawu olucacileyo lokuba kufuneka usebenze ukusombulula into emi endleleni yakho. Ukuba ungakwenza oku, unethuba elingcono kakhulu lokufezekisa zonke iinjongo zakho. Ihlabathi Okwangoku kuphela kunegumbi labantu abaqaqambileyo kwaye kufuneka ubekhona kweli qela likhethiweyo.
Olu luvo mhlawumbi lolona luvakalayo, kuba luya kudibana nezibetho zeBhayibhile eYiphutha. Ukuphupha izinambuzane ezinokubonwa kuphela luphawu lokuba kukho into ekuphazamisayo.
Ukuba kukho amaqela aliqela, inokubonisa ukuba kukho izinto ezininzi kwaye ukuba inye kuphela, ukuchongwa kuya kuba lula. Zama ukuqonda kwaye uqonde ukuba yintoni enokukukhathaza emva koko usebenze kwisisombululo.
Esi sisikweko esihle apho kuya kufuneka usombulule ingxaki ngokupheleleyo, kuba ayikasonjululwa ngokuchanekileyo. Xa umntu ekholelwa ukuba isisombululo asikabuyi, kulapho yonke into ibuyayo.
Kuya kufuneka uhlalutye imeko yakho kwaye uqonde ukuba ukusombulula ngokupheleleyo le ngxaki kuya kuthatha umzamo omkhulu. Ngexesha lokuba ukwazi "ukubulala" ngokupheleleyo le meko, izinto ziya kuba ngcono.
Ngezinambuzane kuwo wonke umzimba
Ngamanye amaxesha, nokuba ungaqondanga, uvumele ezinye izinto ezimbi ukuba zisondele kuwe, ezimbi. Ayisiyongxaki nje, abanye abantu kusenokwenzeka ukuba bahlala bekujongela phantsi.
Kuya kufuneka usebenze ukuyisombulula ngendlela ekuthandayo kwaye ususe yonke into kuwe. Zama ukuthatha eli thuba ukhethe ngcono ukuba yeyiphi eya kuthi ibaluleke kuwe ebomini bakho.
Iimpikiswano ezijamelene nosapho zingakhokelela kwiingxaki ezinzulu zobudlelwane phakathi kwawo onke amaqela achaphazelekayo. Ukuphupha izinambuzane ezijikeleze indlu luphawu lokuba umntu uvumela amampunge angene endleleni yayo yonke into.
Kuyacetyiswa ukuba ujonge ukuba ungubani emva koko usebenze ekusombululeni ezi mpikiswano. Abona bantu babalulekileyo kuwe kufuneka babe lusapho lwakho kwaye ngamanye amaxesha bafuna uncedo oluncinci.
Uloyiko lwakho kunye nokuchasa ngamandla kuyo yonke into ongayithandiyo kunokuba nokuvavanya utshintsho entliziyweni yakho. Ukuphupha izinambuzane kwaye ukuba ungomnye nje yinto embi malunga nendlela ophatha ngayo iyantlukwano.
Zama ukungaboni abantu abohlukeneyo becinga ukuba baphosakele okanye banengqondo encinci kunawe. Zama ukuqonda ukuba umahluko akusoloko ungumqondiso wokujongela phantsi kwaye kubantu abaninzi ungafunda kubo.
Ezinye iingxaki xa zibekwe ngendlela efanayo zingabonisa imeko enzima kakhulu. Ukuphupha izinambuzane ezikuhlaselayo luphawu lokuba kufuneka usombulule iimeko ezininzi ezingekasonjululwa.
Ayiloxesha elifanelekileyo lokuqhubeka nokuphepha ingxaki, kuba iya kuzisa enye efanayo. Ixesha likucela ukuba ube nesimo sengqondo, usombulule iingxaki kwaye ungafumana isifundo esifanelekileyo kweli nqanaba libi.
Oku kubonakalisa ukugula ngokunxulumene noloyiko kunye nokungaqiniseki, ke lixesha lokuba ukhule. Yenza uhlalutyo ukuze uqonde ukuba konke kuyinyani okanye liqhinga nje lokubaleka ungquzulwano. Zama ukufunda ukuba iingxaki ziya kusonjululwa kuphela xa ujongana nazo.
Ngaba olu hlobo lwamaphupha luyimbonakaliso embi?
Ukuphupha ngesinambuzane sisilumkiso nje kuwe sokuba uqale ngokuhoya iingxaki ezincinci. Ngendlela efanayo nesinambuzane esikucaphukisayo kwaye sisuse uxolo lwakho, ingxaki yenza okufanayo kwaye oku kubi.
Ukubulala izinambuzane kufuneka uphakame kwaye uzibulale, malunga nengxaki iyafana. Vuka, ulwe kwaye ubabulale kube kanye!